U-Uber uyavuma ukuba basokola kakhulu ngokuchaphazela abasebenzisi abazizigidi ezingama-57 | Iindaba zeGajethi
U-Uber ukuqinisekisile nje ngokusemthethweni oko iiakhawunti zabasebenzisi abazizigidi ezingama-57 zagqogqwa ngo-Okthobha ophelileyo ka-2016. Ukuvuma kuvuma ukuba iiakhawunti ezigqatshuliweyo zezabathengi babo kwaye akukho namnye kubo obalekayo, nditsho nabaqhubi.
Oku kubi kakhulu kwaye kuqwalaselwa ngakumbi inkampani yenze intlawulo engaphezulu kwe- $ 100.000 yokufihla i-hack. Ngoku, xa ngaphezulu konyaka kudlulile, ingxelo esemthethweni iyavela apho kucaciswa ukuba isiseko sayo esigcinwe kwiiNkonzo zeWebhu zeAmazon, sengozini ngabagculi.
Isiteyitimenti silumkisa ukuba yonke idatha yaba bantu bongeza kwi iinombolo zefowuni, iidilesi, iinombolo zelayisensi kunye nawo onke amagama kunye needilesi ze-imeyile zafunyanwa ngabagculeli. Kwimeko yabaqhubi be-Uber abachaphazeleke yile ngxaki, isalathiso senziwa kuphela kubahlali baseMelika kwaye akukho meko ithethwayo ngamanye amazwe. Umvuzo ofunyenwe ngabagculeli kwaye uhlawulwe ngu-Uber ufumene isivumelwano sokucima idatha efunyenweyo kwaye oku akuzange kuvezwe.
Ekugqibeleni ingxelo ivele ngqo Indawo ka-Uber kwaye ityhila yonke into eyenzekileyo kuhlaselo lwekhompyuter. Ukongeza, inkampani yongeza inketho yokuqinisekisa ukuba awungomnye wabo bachaphazeleke yile nto yenzekileyo kunyaka ophelileyo kwimeko yokuba ungumqhubi, ungandwendwela idatha eli khonkco. Kwaye akukho mntu ukhuselekile ekuqhekekeni kwaye iinkampani ezinkulu zihlala zifunwa kakhulu ukufumana umvuzo wezemali. Kungekudala, eSpain, amawaka eekhompyuter zeTelefonica afumana uhlaselo lwe-ramsomware olubashiya bengenaluncedo kangangeeyure ezimbalwa benaniselwano ngomvuzo wemali ocelwe ngabagculeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » U-Uber uyavuma ukuba basokola kakhulu ngokuchaphazela abasebenzisi abazizigidi ezingama-57
INintendo yenza uthotho lwezithintelo ezinkulu kubasebenzisi be3DS